Nafeniny tao anatin’ny valizy izany no saron’ny ladoany. Milanja 1250 girama izany raha araka ny fanampim-baovao azo. Saika handeha tamin’ny zotra Ethiopian Airlines ity vahiny ary any Brésil ny anton-diany rehefa avy mandalo ny seranam-piaramanidin’i Addis Abbeba. Vita omaly ny fitsirihina ireo zava-mahadomelina ary voamarina fa « cocaine » ilay karazana. Mitombina tanteraka ny tombana hatramin’izay fa toerana fandalovan’ny zava-mahadomelina i Madagasikara noho ny maha-makarakara ny seranana ao aminy.
ASAN-JILOLAHY ANY SAVA
Mirongatra ny asan-jiolahy mitam-basy any Sava noho ny fikaran’ny lavanila. Nisy olona izay nitazona io « volamena maintso » io tao an-tranony no norobain’ny jiolahy ary naratra mafy vokatry ny daroka nanjo azy. Lasa ny lavanila sy ny entana maro izay tao an-trano ary lasan’ny jiolahy hatramin’ny moto aza.
Olana amin’ny mpandraharaha malagasy, raha ny fanazavana voaray nandritry ny hetsikaz Carrefour de l’entrepreunariat tetsy amin’ny Pavé Antaninarenina, ny tsy fahampian’ny fivelaran’ny tsena. Antony, hoy ny voalaza, nanaovana ny fampiratiana hatramin’ity anio ity izany.
Efa tena tsy voafehy intsony ankehitriny ny tambazotran-tserasera eto amintsika. Misy sahisahy ratsy mihitsy ireo mpikirakira azy ireny satria dia raim-pianakaviana iray omaly izao no mampiseho ny sariny misery manindrona antsy zaza iray.
Manoloana ny hafitsok’ireo mpitatitra eny amin’iny kaominin’Ivato iny izay mikasa hampiakatra ny sara-pitateran’izy ireo ho 800 ariary dia hisy ny hetsika goavana ataon’ireo mponina anio. Ny kalitao, hoy izy ireo, 0,01% koa hampiakatra aho hampiakatra.